BBC Somali - Aqoon Guud - Nidaamka Federaaliga iyo Qaranimada Soomaaliya
7 September, 2011, 09:52 GMT 12:52 SGA
Nidaamka Federaaliga ah qeyb kama uusan ahayn qorshihii hore ee Soomaaliya markii laga asaasayay midoobidii dhulalkii ay kala gumaysan jireen Ingiriiska iyo Talyaaniga. Fikradani waxay kaga timid dastuurka markii ugu horeysay Xeerkii Kumeel Gaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004. Markaas Soomaaliya qeyb qeyb ayay ahayd oo laba gobol ayaa dowlado dhistay kuwaasoo ahaa kuwo shaqeynaaya oo leh dastuuradooda. Mid ka mid ah waa Somaliland oo gooni isu taagtay sheegatayna in ay tahay jamhuuriyad madax bannaan.
Dastuurka Qabyada ah wuxuu siinayaa dowlada federaalka in tilaabooyin maamul ay qaado markii dowlad goboleed ay dabacsan tahay ama ay u dhaqmeyso si lidi ku ah dastuurka. Ma jiro wax bixin ama tilaabo la qaadayo hadii wax u dhacaan sida sidaan caksiga ku ah (ma jiraan wax tilaabo ah oo dowlad goboleedku qaadi karto markii dowlada federaalka ahi dabacsan tahay ama u dhaqmeyso si lidi ku ah dastuurka).
Dastuurka Qabyada ah wuxuu aad uga hadlayaa waxa ka dhaca Muqdisho maadaama ay tahay caasimada federaalka, ee nidaamka federaaliga ah. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga wuxuu bixinayaa saddex ikhtiyaar oo la kala dooran karo:
- In Muqdisho ku taalo mid ka mid ah dowlad goboleedyada
- In Muqdisho noqoto degmada caasimada federaalka ee aan ku oolin dowlad goboleed ayadoo hoos imaaneysa dowlada federaalka inkastoo awoodo laga yaabo in la siiyo ururka maamulaya caasimada ayadoo caasimaduna aysan wax wakiilo ah u diraynin Aqalka Dowlad Goboleedka ( hoos eeg).
-In Muqdisho noqoto dowlad goboleed xaqeeda leh, balse aan ku darsami karin dowlad goboleedyada kale midkoodna.
Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga ayaa go,aan ka gaari doona midka saddexdaas arimood la qaadanayo marka sidaa laga maqlo la tashiga dadweynaha.
Dowlad goboleedyo cusub ayaa laga dhisi karaa dhulka ku yaala jamhuuriyada gudaheeda markii ay daruufo jiraan. Waxaa sidoo kale lagu soo dhaweyn karaa in jiritaano kale lagu soo dhaweeyo in ay ku soo biiraan Federaalka, waa hadii ay doonayaan. Waxaa loo qaateen ah in macnaha laga wado Djibouti iyo gobolada looga hadlo af Soomaaliga ee wadamada jaarka ah.
Cutubka kusaabsan dastuurada dowlad goboleedyada (Cutubka 13) ee Dastuurka Qabyada ah wuxuu sharaxayaa in dowlad goboleedyadu ay sameeyaan dastuuro ay ayagu leeyihiin oo waafaqsan Dastuurka Federaalka iyo mabaadiida aasaasida. Sidoo kale waa in lagu sameeyo asaaska ah ' ka qeybgalka buuxa ee dadka' ( Qodobka 142), iyo la tashiga.